स्वास्थ्य पेजसरकार कोरोनाबाट बचाउने कि मृत्युबाट ? - स्वास्थ्य पेज सरकार कोरोनाबाट बचाउने कि मृत्युबाट ? - स्वास्थ्य पेज
चैत्र ११ गतेदेखि लागू भएको बन्दाबन्दीलाई चौथोपटक थपेर सरकारले जेष्ठ मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ। नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको यो कदमको नागरिकले पालना त गर्नैपर्छ तर प्रश्न उठ्छ कहिलेसम्मरु
कोरोना महामारी कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन’ले यो महामारी कहिल्यै अन्त्य नहुन पनि सक्ने र मानिसले नै आफ्नो कृयाकलापहरु परिवर्तन गरेर बाँच्नुपर्ने आँकलन गरिसकेको छ।
सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ मान्छे कोरोनाले मात्र मर्दैन। अन्य रोगिहरुले उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। कसैको घर व्यवहारको चाँजोपाँजो बिग्रिएर आत्महत्या जस्तो कठोर कदम उठाइरहेका छन्।
हालसंग कोरोनाको कारण १० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् तर बन्दाबन्दीका बीच विगत दुई महिनामा ९ सय नेपालीले आत्महत्या गरिसकेको कुरा नेपाल प्रहरीकै रेकर्डमा छ ।
त्यस्तै ३ सय सुत्केरीले उपयुक्त प्रसुती सेवा नपाएर ज्यान गुमाइसकेका छन्। उपचार नपाई अन्य धेरै बिरामीले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन् सबैको एकीकृत तथ्याङ्क यो स्तम्भ तयार पार्दा सम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन । के यि नागरिक नेपाली थिएनन् रु
शहरमा मान्छे काम गर्न नपाउँदा माम गुमाउँदैन् गाउँमा बिदेशबाट फर्किएका थुप्रै जनशक्ति तास खेलेर बसिरहेको छन् । यो जनशक्तिलाई एउटा निति बनाई राज्यले परिचालन गर्न सक्ने हो भने कृषिमा परिवर्तन आउन सक्थ्यो । जसले गिरेको अर्थतन्त्रलाई केही त्राण दिनसक्यो ।
तर सरकारले भने केही किलो दालचामल बाहेक कसैको लागि कुनै राहत प्याकेज ल्याएको छैन। युगौँदेखि कर तिरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका व्यवसायीहरुलाई समेत यो सरकारले सम्बोधन गर्न चाहेको छैन। त्यतिमात्र होइन ‘आयकरमा ७५ प्रतिशत सम्म छुट दिने’ भनेर उनिहरुलाई झुक्याएको छ। यो बर्ष केही टेलिकम, ईन्टरनेट तथा टिभीसेवा संचालक, खाद्यान्न व्यापारी र निर्माण कम्पनी बाहेक अन्य सबै व्यवसाय घाटामा जाने सुनिश्चित छ। घाटामा गएपछी आयकर तिर्नै पर्दैन । अव तिर्नै नपर्ने करमा छुट दिनुको के तुक छरु
सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार कदमले व्यवसायीलाई पनि भविष्यमा गैरजिम्मेवार बनाउन सक्छ। व्यवसायीहरूको मनोविज्ञान राज्यप्रति नकारात्मक बन्न सक्छ र स्वाभाविक रूपमा उनिहरुले प्रश्न गर्न सक्छन् ‘राज्यलाई कर किन तिर्ने रु’
जुन राज्यमा व्यवसायी र सरकारको दुरी बढी हुन्छ त्यो राज्य आर्थिक रुपमा कमजोर हुन्छ। सरकार दुई चार जना ठुला व्यवसायीहरूको वरिपरी बसेर मात्र समग्र अर्थतन्त्रको आँकडा देखिँदैन । जीवनभर करमा योगदान गरेका र अहिले जटिल समस्यामा फसेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सरकार छ भन्ने आभास दिलाउन सरकारले सकेको छैन ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ सरकारको दायित्व अन्ततगत्व जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु हो कि केवल कोरोनाबाट मात्र जोगाउनु होरु सरकार केवल कोरोना मृत्युको मात्र हिसाब किताब राखिराखेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित गर्ने ब्रिफिङमा पनि कोरोनाको कारणले भएका मृत्युको मात्र सूचना दिएर पुग्दैन। कोरोनाको अस्तव्यस्तताको बाबजुद गैरकोराना मृत्युको पनि सुचना दिनुपर्छ। अनिमात्र यो महामारीको स्पष्ट तस्विर जनता माझ आँउछ।